15 Mawduucyada WordPress ee Bilaashka ah iyo Qiimaha Bilaashka ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/15 Mawduucyada WordPress ee Bilaashka ah iyo Qiimaha Bilaashka ah
15 Mawduucyada WordPress ee Bilaashka ah iyo Qiimaha Bilaashka ah
0 Daqiiqado 19 ayaa akhriyay
Shaki la'aan, blogku waa qalab shaqeynaya si kor loogu qaado ganacsigaaga ama wax ku biirinta buuxinta. Marka aad blog ka codsato mareegaha waxa laga yaabaa in ganacsigu sii socdo, adeegyo bixiyo, oo uu helo macaamiil cusub. U sheegida dadka waxa aad ku bixinayso goobtaada waxaad ku dhiiri galin kartaa inay kaa soo noqdaan oo ay kaa iibsadaan. Halkan, baloogga waxaa laga helaa inuu yahay mid ka mid ah fursadaha ugu waxtarka badan ee kordhinta taraafikada iyo beddelka bogga internetka.
Ka sokow, adoo socodsiinaya blog-ka gaarka ah waxaad si fudud uga dhigi kartaa il dhaqaale oo aad u sheegtid aduunka naftaada. Haddii aad leedahay dhegaystayaal ballaadhan, waxaad si fudud uga ganacsan kartaa blog-ka adiga oo dhejinaya xayeysiis, oo ay ku jiraan isku-xidhaha xidhiidhka, iwm.
Haddii aad qorsheynayso inaad dhisto ilo saaxiibtinimo ku habboon oo fududayn kara in wax laga beddelo oo wakhti kasta la sameeyo, isku day WordPress. Muujinta ikhtiyaarka waxka beddelka ee horumarsan ee mawduuca WP wuxuu noqonayaa mid la awoodi karo bilawga iyo isticmaalayaasha xirfada leh labadaba. Haddii aad jeceshahay fikradda ka faa'iidaysiga WordPress ee balooggaaga soo socda, aan u gudubno qaar ka mid ah mawduucyada ugu wanaagsan ee bilaashka ah & kuwa qaaliga ah ee blog-ka WordPress.
Astra waa mid ka mid ah mawduucyada ugu caansan WordPress ee la heli karo, oo leh in ka badan hal milyan oo rakibid firfircoon. Sidoo kale waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu sarreeya ee bogagga blog-ga. Waa maxay sababta ay caan u tahay? Sababtoo ah waa mid aad u dabacsan, la beddeli karo, oo la shaqeysa dhammaan bog-dhisayaasha ugu fiican sida Gutenberg, Elementor, Beaver Builder, iyo Brizy. Isticmaalka kuwan, waxaad abuuri kartaa nooc kasta oo ka mid ah goobta adoo isticmaalaya interface-jiid-iyo-dhiibid.
Waxaa jira astaamo kale oo aad u tiro badan, oo ay ku jiraan madax la beddeli karo iyo cag-geeye, wareeg aan dhammaad lahayn, taageerada menu-ga weyn, kontoroolka buuxa ee midabada iyo qoraalka, iyo liis dheer oo xulashooyin kale oo loogu talagalay naqshadaynta qaabka goobtaada.
Hel qiimo dhimis 10% gaar ah Astra Pro, xidhmada muhiimka ah, iyo xidhmada kobaca.
Hel qiimo dhimis 10% gaar ah Astra Pro, xidhmada muhiimka ah, iyo xidhmada kobaca. Muuji Wax Yar
Haddii aad qorsheyneyso inaad bilowdo baloog muuqaal ah ama aad rabto inaad cusboonaysiiso midka jira, Eflex waxaa laga yaabaa inuu ku habboon yahay. Waxay ku habboon tahay WordPress 5.0, markaa waxaad filan kartaa astaamo horumarsan oo ka baxsan sanduuqa. Plugins Premium, sawirada res-ka ee gunnada ah, iyo qalabyada kale ee waxtarka leh ayaa diyaar ah oo aad gacanta ku hayso. Sababtoo ah Eflex waa mid si buuxda u jawaaba oo saaxiibtinimo leh, uma baahnid inaad ka walwasho la qabsiga shabakada.
Isagoo ka hadlaya la qabsiga mawduuca, waxaad u baahan tahay inaad sheegto in qoraalka iyo sawiradu sidoo kale yihiin kuwo dabacsan. Iyadoo taas la yiraahdo, waxaa laga yaabaa inaad hubiso in si sax ah loo samayn doono, markaa booqdayaashu ma la kulmi doonaan khasaaro tayo leh. Waxa laga yaabaa inay ka baadho goobta qalab kasta oo casri ah oo ay gacanta ku hayaan oo aanay filayn wax burbur ah. Ka sokow, addoo ku dara liiska hoos-u-dhaca ah, is-dhexgalka warbaahinta bulshada, iyo nidaamka faallooyinka waxaad u oggolaan doontaa taageerayaashaada inay ku raaxaystaan ​​dhex-galka blog-kaaga.
Markaad fiirinayso xirmada, waxaad sidoo kale ka heli doontaa bogag badan oo indho-qabad leh oo waqti kasta ah. Bog kastaa waxa uu wataa walxo heersare ah oo loogu talagalay in lagu sameeyo habaynta degelkaaga mid fudud oo degdeg ah. Dhanka kale, adigoo isticmaalaya Bogga dhisaha ee Elementor, waxaad fursad u helaysaa inaad dhisto nuxurka nooc kasta iyo kakan. Ku qalabaysan tifaftirihii ugu dambeeyay ee jiid-n-Drop waxay u oggolaanaysaa beddelka muuqaalka balooggaaga iyada oo aan wax xirfado codayn ah lahayn.
Marka lagu daro plugin Ecwid ee ku dhex dhisan ee lagu dhisayo dukaanka khadka ah, TM Timeline plugins, iyo waxyaabo kale, waxaad heli kartaa Jet add-ons. Mawduuca Eflex WordPress waxaa la socda kuwan soo socda:
JetElements add-on waxay ku daraysaa qaybo ballaadhan oo aan ku jirin xirmada Elementor-ka caadiga ah. Waxa ay ogolaataa in la adeegsado nooc ka duwan nuxurka iyada oo aan la taaban hal xariiq oo kood ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad u guurto baloogyada qaabka gudaha ilaa aad ka hesho muuqaalka.
JetBlocks wax-ku-kordhintu waxay awood u yeelataa abuurista madax iyo cago-yaal iyada oo aan loo baahnayn aqoon farsamo.
JetTricks plugin wuxuu kaa caawinayaa inaad ku darto saameyn muuqaal oo kala duwan iyo animation boggaaga internetka.
Haddii aad raadineyso xal diyaarsan oo kaa caawin doona inaad kor u qaaddo taraafikada bartaada fiidiyaha, Eflex waa qumman yahay.
Maadaama socdaalku noqday mid la awoodi karo, dad badan ayaa maarayn kara kharashyada safarka. Si kastaba ha ahaatee, qorsheynta safar kasta waxay la yaaban yihiin meesha ay ka bilaabayaan, tagaan, iyo waxa ay arkaan. Oo ma jiraan wax ka fursad badan blogyada safarka. Haddii aad tahay qofka maamulaya mareegaha noocaan ah, waa in aad fahanto waxa aan ka hadlayo. Laakiin weli, weligaa ma ka fikirtay sida uu u ekaan karo blog-ka safarka? Ma ku fiican tahay kan aad hadda haysato?
Waxaan u maleynayaa inaadan joogin haddii aad akhrinayso maqaalkan. Haddii aad raadinayso ikhtiyaar aad ku cusboonaysiiso blogkaaga jira, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Sababtoo ah maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo mawduuc WordPress ah oo qurux badan, casriga ah oo ku habboon blog ku saabsan safarrada. Halkan waxa aad ka heli doontaa wax kasta oo loo baahan yahay si aad u cusboonaysiiso mashruucaaga hadda iyo soo jiidashada soo booqda badan oo ka mid ah. Aan si hoose u eegno waxa uu qarinayo qaabka Journyssimo.
Ugu horrayn, mawduucan WordPress wuxuu la imanayaa tafatiraha nuxurka jiid-n-dhibcaha hal-abuur leh oo caan ah. Caawinteeda, waxaad u habeyn kartaa shabakadaada oo aad ku cusbooneysiin kartaa waxyaabo kala duwan adiga oo aan taaban hal xariiq oo kood ah. Waxaad si fudud u dhaqaajin kartaa walxaha ku jira qaabka ilaa aad ka hesho muuqaalka. Dhanka kale, Jet plugins ee laga heli karo xirmada waxay rabeen inay xoojiyaan shaqeynta Elementor. Ka faa'iidaysiga iyaga waxaad abuuri kartaa madax, cago-gooyeyaal, walxo dhegdheg leh, iyo xataa saamayn muuqaal ah markaad riixdo badhanka.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad lacag ka samayso bloggaaga oo aad iibiso safarrada gaarka ah, waxaad isticmaali kartaa xirmo WooCommerce ah oo isku dhafan. Caawinteeda, waxaad haysataa fursad aad ku aasaasto dukaan toos ah oo online ah oo ku yaal mareegahaaga. Ka sokow, marka lagu daro plugins gaar ah ee dukaanka online waxaad ka qayb qaadan doontaa si fudud oo raaxo leh daalacashada taasoo keentay waayo-aragnimo wax iibsiga la xoojiyey. Sidaa awgeed, waxa laga yaabaa inaad filayso korodhka taraafigga iyo beddelka bloggaaga.
Ma doonaysaa inaad kor u qaaddo taraafikada boggaaga sawir qaadista? Isku day mawduucan soo jiidashada leh ee WordPress oo si buuxda uga jawaabaya is dhexgalka blog. Iyada oo Worly ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku disho laba shimbirood hal dhagax: soo bandhig faylalkaaga oo aad gaadho taraafikada sare. Sawirka gudaha ku dhex jira wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo jiidato dad badan oo ku soo booqda shaqooyinkaaga halka shaqada blogku ay u ogolaanayso mareegahaagu inuu noqdo mid la isku halayn karo. Waxaad heli doontaa fursad aad kula xiriirto dhagaystayaashaada qoraallada blog-ka iyo nidaamka faallooyinka. Tani waxay si weyn u kordhin doontaa aaminaaddaada, markaa waxay kicisaa taageerayaal cusub.
Ka sokow, waxa kale oo aad ka heli kartaa bogag badan oo xarrago leh ujeedooyin kala duwan. Waxay kuu oggolaan doonaan inaad dhisto shabakad dhammaystiran oo aad ku bixiso macluumaadka muhiimka ah ee suurtogalka ah. Bog kastaa wuxuu la socdaa qaybo gaar ah oo u horseedaya habayn website fudud oo lagu raaxaysto. Marka lagu daro Elementor Page Builder, habkani wuu sii fududaan doonaa. Uma baahnid inaad qorto kood si aad u dhisto noocyo kala duwan oo ka kooban. Adigoo isticmaalaya tifaftiraha jiid-n-Drop, kaliya waxaad dhaqaajin kartaa walxaha ku jira qaabka ilaa aad ka hesho sida uu u ekaado mareegahaagu.
Iyada oo ay weheliso Elementor, Template Worly waxa uu bixiyaa xidhmo Jet ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo shaqeynta goobtaada. JetElements waxay ogolaataa adeegsiga qaybo aan ku jirin xirmada Elementor-ka caadiga ah. Isla mar ahaantaana, plugin JetThemeCore wuxuu caawiyaa abuurista madax-madaxeedyo, cagood, iyo qaybo. Isticmaalka waxa kale oo aad dooran kartaa baloogyo hore loo sii qorsheeyay oo ku dheji bogag dhowr dhagsiin ah. JetTricks, waxaad haysataa fursad aad ku jazz ka sameysato degelkaaga oo leh saameyn firfircooni leh, iwm.
Haddii aad rabto inaad iibiso shaqooyinka sawir qaadista iyo adeegyada la xidhiidha sawir qaadista, xor u noqo inaad hirgeliso plugin Ecwid. Waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan e-ganacsiga e-commerce kaas oo u oggolaanaya in la sameeyo dukaanka khadka tooska ah ee badhanka. Markaad ku darto bakhaar mareegahaaga waxaad si fudud ku gaadhi kartaa beddelaadyo la xoojiyey.
Dhanka sifooyinka kale, waa sida soo socota:
Qayb ka mid ah plugins Cherry.
Sawirro sare oo gunno ah iyo kuwo kale.
Activello waa mawduuc WordPress ah oo nadiif ah, ujeedo badan leh oo bilaash ah. Haddii ay dhacdo in aad rabto in aad abuurto baloog si shakhsi ah loo isticmaalo, qaabkani waa xal qumman. Waxa kale oo ay ku habboon tahay cuntada, safarka, tacaburrada, sawir-qaadista, jirdhiska, shirkadda, ama blog kasta oo kale. Iyada oo ku saleysan Bootstrap waxay xaqiijisaa habayn buuxda oo jawaab celin leh iyo qaab mobile-saaxiibtinimo ah oo ay la socoto nakhshad qumman oo pixel ah.
Sidaa darteed, akhristayaashaadu waxay awood u yeelan doonaan inay ka baadho baloogga aalad kasta oo ay gacanta ku hayaan. Ha ahaato desktop-ka, Laptop-ka, tablet-ka, ama casriga ah oo leh muuqaal cufnaanta pixel sare leh.
Marka laga reebo naqshadeeda soo jiidashada leh, Activello waxay ku faani kartaa shaqeyn sare. Ka kooban dhowr widgets oo caado u ah iyo duleel buuxa waxay u oggolaanaysaa in nuxurkaaga lagu muujiyo iftiinka ugu fiican. In lagu hagaajiyo SEO mawduucan WordPress wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gaarto meesha ugu sareysa natiijooyinka raadinta. Ka sokow, waxay dammaanad qaadaysaa rarista degdega ah kaas oo si togan u saameeya SEO oo kor u qaada isticmaalka. Guud ahaan, Google ayaa jeclaan doona goobtaada lagu dhisay Activello.
Inkasta oo qaab-dhismeedkani yahay lacag-la'aan, haddana wuxuu ku faani karaa shaqeynta kama dambaysta ah. Waxaa la wanaajiyey in lala shaqeeyo WooCommerce, W3 Total Cache, Foomka Xiriirka 7, Foomamka Cuf-jiidadka, Jetpack, Yoast SEO, iwm. Markaa, ma waayi doontid qalabka ku habboon haddii aad go'aansato inaad cabbirto. Sifooyinka kale ee aad ka heli doonto Activello oo aad u isticmaali doonto si aad u horumariso blog-ka, waxa aad ka heli kartaa kuwan soo socda:
Customizer WordPress wuxuu la socdaa daraasiin ikhtiyaari is-habayn wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad dejiso slider-ka, beddelka nidaamka midabka, iwm.
Wareegga aan dhammaadka lahayn ayaa awood u siinaya in isla markiiba la soo geliyo macluumaadkaaga.
Xirmada Icons FontAwesome waxaa ku jira astaamo ku saleysan vector oo aad ku isticmaali karto midab iyo cabbir kasta oo aad ka dalban karto meel kasta oo websaydh ah.
Dhanka kale, hawlaha ugu muhiimsan ee mawduuca ayaa lagu daboolay dukumeenti faahfaahsan. Taas marka la yiraahdo, waxaad la qabsan doontaa rakibaadda mawduuca xitaa haddii aad leedahay aqoon farsamo oo yar.
Hubaal, ma caawin karin, laakiin aan Monstroid2 ku daro liiskan ugu dambeeya ee mawduucyada naqshadaynta websaydka WordPress ee blogyada. Waxaan u malaynayaa in aanay jirin cid weligii laga maqli lahaa qaab-dhismeedkan ujeeddo-badan leh oo si heersare ah u shaqaynaya. Siideynta Monstroid2 ayaa qarxisay internetka oo hadda waxaan doonayaa inaan kuu sheego sababta.
Marka hore, waxaad la yaabi doontaa miisaanka xirmada ee mawduuca. Waxa uu miisaankiisu ka yar yahay 250kb taas oo keentay hawl qabad siman iyo raritaan degdeg ah. Xawaaraha Google wuxuu ku qiimeeyay Monstroid2 oo leh darajada waxqabadka A93 iyo wakhtiga rarida ee go'aamiyay 1.2s. Tani waxay ka dhigan tahay in booqdayaasha boggaaga laga yaabo inay ku tiirsanaadaan khibrad goobta gaarka ah. Ka sokow, rarka degdega ah ayaa kaa caawin doona inaad hoos u dhigto heerka ka tagitaanka shabakada.
Doorashada Monstroid2 mid ka mid ah mashaariicda shabakadaada waxaad fursad u heli doontaa inaad sahamiso maktabadda bogag horay loo qorsheeyay. In ka badan 500 oo qaybood iyo bogag diyaarsan ayaa laga heli karaa adeeggaaga. Way fududahay in la isticmaalo oo la habeeyo si ay kuugu oggolaadaan inaad gaarto natiijooyinka ugu fiican. Intaa waxaa dheer, waxaad geli kartaa in ka badan 20 harag oo soo jiidasho leh oo ku saabsan mowduucyo kala duwan waxaadna filan kartaa cusbooneysiin joogto ah toddobaad kasta.
Hubaal, horumariyayaashu waa isku dari waayeen mawduuca Monstroid2 WordPress iyo Elementor Page Builder. Tani waa mid ka mid ah tafatirayaasha ugu caansan ee u oggolaanaya tafatirka waqtiga-dhabta ah iyo habaynta kood la'aanta. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa wax walba oo aad kula shaqeyso Elementor: Jet family plugins, shaqaynta qaabaysan, madaxa, iyo dhisaha cagta. Waad ku mahadsan tahay tifaftiraha jiid-n-dhibcaha ee gacanta ku leh, uma baahnid inaad taabato koodka si aad u bedesho qaabka website-kaagu u ekaado. Habaynta bilaa koodka ayaa Monstroid2 ka dhigaysa mid bilow ah iyo horumariyeyaal khubaro ah labadaba.
Marka laga hadlayo plugins-ka ku jira xirmada, waxaa muhiim ah in la muujiyo waxyaabaha soo socda:
JetBlog si aad u matasho macluumaadkaaga firfircoon.
JetTricks si aad u sameyso shabakadaada mid soo jiidasho leh oo leh saameyn muuqaal ah.
JetWooBuilder ee abuurista qaabaynta alaabta iyo boggaga WooCommerce si loo soo bandhigo dukaankaaga onlaynka ah.
JetTabs si loogu dhigo nuxurka qoraalka si kooban.
Jet Plugins Wizard si loo dhamaystiro rakibaadda iyadoo la adeegsanayo dhawr dhagsi iwm.
Monstroid 2 Lite [Bilaash]
Haddii aad weli shaki ka qabtid mawduuca Monstroid2 WordPress, isku day nooca Lite si aad u gaarto go'aanka ugu dambeeya. Waxay ku timaadaa lacag la'aan taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh kuwa ka walaacsan. Laakiin xaqiiqadu ha ahaato mawduuca xorta ah si aanu ku marin habaabin. Nashqada qaabaysan wali waxay bixisaa hawlo iyo astaamo kala duwan oo buuxa. Waxa kaliya ee aan lagu bixin nooca Lite waxaa iska leh adeegga taageerada. Sidaa darteed, hubi inaad leedahay ugu yaraan faham aasaasi ah oo ku saabsan sida loo dhiso loona tafatiro mareegaha.
Ku-kummanaanta blogging Monstroid2 Lite waxay soo bandhigaysaa qoraal-buuxinta pixel-ka fiican, naqshad ku jihaysan nuxurka, iyo tiro badan oo ikhtiyaari is-habayn ah. Midda dambe waxay ku siin doontaa koontarool buuxa oo ku aaddan muuqaalka boggaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa Customizer Live kaas oo u oggolaanaya in boggaaga wax laga beddelo qaab-waqtiga dhabta ah. Gunno: si aad u aragto isbeddelada lagu dabaqay naqshadaynta goobtaada, uma baahnid inaad dib u soo dejiso bogga.
Monstroid2 Lite waxay leedahay kood nadiif ah, si wanaagsan loo habeeyey, oo si taxadar leh looga faallooday. Waxaa lagu qoray iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada shabakadda ee ugu dambeysay taasoo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u fahamto ujeeddada shay kasta. Inkasta oo mawduucu aanu lahayn taageero xirfadeed, haddana waxay la socotaa dukumeenti faahfaahsan. Waxay ujeedadeedu tahay inay kugu hagto tallaabo kasta oo ku saabsan rakibidda mawduuca iyo u adeegsiga mid ka mid ah mashaariicdaada.
Si loo bixiyo khibrad adeegsi oo la xoojiyey, Monstroid2 Lite waxay bixisaa liiska hoos-u-dhaca, isdhexgalka warbaahinta bulshada, nidaamka faallooyinka, iyo foomamka shabakadda shaqada. Foomka xiriirka wuxuu u oggolaanayaa booqdayaashaada inay dareemaan inay kula soo xiriiri karaan wakhti kasta. Tan iyo sifooyinka kale waxay kuu oggolaanayaan inaad dhisto xiriir adag oo aad la yeelato dhagaystayaashaada. Dhanka kale, foomka raadinta wuxuu ogolaanayaa helitaanka macluumaadka loo baahan yahay iyada oo aan dadaal badan la helin.
Shaki la'aan, mawduucan ugu yar ee weli quruxda badan ee WordPress wuxuu leeyahay wax kasta oo looga baahan yahay shaqeynta horumarsan iyo khibrad heer sare ah oo goobta ah.
Mawduuca aadka u liidata ee WordPress waxa uu u eg yahay blog caadi ah, sidii aanu u arki jirnay. Kani waa naqshad kale oo bilaash ah oo leh nakhshad nadiif ah iyo qaab dhismeed yar oo ugu yar oo ku habboon kuwa maamula blog. Marka laga reebo qaabka ugu yar, Gridly wuxuu xaqiijiyaa naqshada saaxiibtinimo ee mobilada taasoo keentay dabacsanaan weyn oo goobtaada ah. Akhristayaashaadu waxay heli doonaan fursad ay kaga baaraandegaan blog-kaaga qalab kasta oo casri ah oo ay gacanta ku hayaan. Ha ahaadeen tablets, laptops, ama taleefannada casriga ah ee leh bandhigyada cufnaanta pixel sare.
Ku sii socoshada mawduucan isha ku haysa WordPress waxa laga yaabaa inaad hesho tiro badan oo astaamo ah oo loogu talagalay in laga dhigo isticmaale-saaxiibtinimo ee bloggaaga. Tusaale ahaan, xulashada qaybta ku dhex-jirta waxay gacan ka geysan doontaa waayo-aragnimada wax raadinta ee heer sare ah. Daba-galkaagu maaha inuu dhex maro mareegaha oo dhan si uu u helo mawduuca loo baahan yahay. Waxay ku gaari karaan marka badhan riixo. Ka sokow, waxay heli doonaan fursad ay kula xidhiidhaan foom xidhiidhka anfacaya.
Haddii aad rabto inaad ku faafiso ereyga ku saabsan mashruucaaga internetka, hubi inaad dhexgeliso warbaahinta bulshada ee bloggaaga. Akhristayaashaadu waxay awood u yeelan doonaan inay isla markiiba ku wadaagaan qoraalladaada mareegaha warbaahinta bulshada. Sidaa awgeed, waxaad heli doontaa fursad aad ku gaadho dhegaystayaal ballaadhan, markaa kor u qaad taraafikada goobta. Waxaa ka mid ah sifooyinka kale ee loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad dhisto baloog dhammaystiran, waxaad heli kartaa kuwan soo socda:
midabka asalka gaarka ah iyo sawirka
Taageerada isticmaalka domainka aan xadidnayn iyo wax ka badan.
Haddii aad raadinayso naqshad u eg xirfadle si aad u dhisto blog-wareedka shirkadda, Kritex waxa laga yaabaa inay ku habboon tahay. Waxay ka kooban tahay naqshad casri ah oo ay la socoto shaqeyn awood leh waxayna dammaanad qaadaysaa habeyn fudud oo degdeg ah. Lagu dhisay tifaftiraha nuxurka Elementor waxa ay ogolanaysaa in la tafatiro goobta iyada oo aan la taaban hal xariiq oo kood ah. Elementor-ka, waxa kale oo aad heli doontaa qalab horumarsan oo widgets ah sida khariidadaha Google, Carousel, iyo in ka badan oo bilaash ah.
Kuwa shaqo la'aanta ah ee la siiyay Elementor, horumariyayaashu way horay u socdeen oo waxay ku dareen Jet plugins Kritex. Loo sameeyay si loo xoojiyo hawlaha Elementor waxay kaa caawin doonaan kor u qaadista waxqabadka mareegahaaga. JetElements, waxaad awoodi doontaa inaad ku darto qaybo aan ku jirin xirmada Elementor-ka caadiga ah. Isticmaalka JetMenu waxaad ku dhisi kartaa menus mega heersare ah oo leh qaybo hoos u-hoos u dhaca oo waxaad ku tafatiri kartaa qaab-dhismeedkooda adigoo dhawr dhagsiin ah.
JetTabs add-on waxay la socotaa tabs iyo accordion blocks oo kuu oggolaanaya inaad ka dhigto qoraalkaaga mid kooban. JetReviews plugin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto oo aad habayso dib u eegista soo-booqdayaashaada adiga oo aan lahayn wax xirfado kood ah. Dabcan, JetBlog, waxaad ka dhigi kartaa bloggaaga mid muuqda oo soo jiidasho leh. Isku soo wada duuboo, markaad samaysato degelkaaga adigoo isticmaalaya Kritex ma waayi doontid shaqayn.
Qodob kale oo muhiim ah oo mudan in la xuso ayaa tilmaamaya ka jawaabista iyo dabeecadda saaxiibtinimo ee moobilka ee template. Kritex waa dabacsanaan wuxuuna la qabsan karaa mid kasta oo ka mid ah qalabka casriga ah ee booqdayaashaadu ay gacanta ku hayaan inay baadhayaan bloggaaga. Qoraalka iyo sawiradu sidoo kale waa dabacsan yihiin, markaa si sax ah ayaa loo dhigi doonaa. Sidaa darteed, raacahaagu ma la kulmi doonaan khasaare tayo leh ama cayayaan kale marka uu akhrinayo bloggaaga. Natiijo ahaan, waxaad filan kartaa taraafikada la xoojiyay iyo beddelka goobta.
Marka la eego sifooyinka intiisa kale, waa lagama maarmaan in la muujiyo kuwan soo socda:
WordPress Live Customizer wax ka beddelka qaab-waqtiga-dhabta ah.
Isdhexgalka warbaahinta bulshada iyo nidaamka faallooyinka oo kuu oggolaanaya inaad dhisto sawir la isku halleyn karo oo calaamaddaada ah.
Ecwid plugin loogu talagalay samaynta dukaan khadka ah oo si heer sare ah u shaqeeya.
Foomamka shabakada shaqada oo ay ku jiraan xiriirka, gelida, ku-qorista warsideyaasha, diiwaangelinta isticmaalaha, iyo foomka raadinta.
Turjubaanka WPML iyo qaar kaloo badan.
Blog hal-abuur leh [$59]
Intii aan diyaarinayey liiska mawduucyada WordPress, waxaan rabay in aan doorto doorashooyin kala duwan, premium iyo bilaash, si aan ku siiyo doorasho ballaaran. Markaa, halkan waa qaab kale oo bilaash ah oo si gaar ah loogu sameeyay dadka hal-abuurka leh ee qorsheynaya inay bilaabaan blog. Mawduucan, waxaad awoodi doontaa inaad muujiso naftaada oo aad ka dhigto goobta mid aad adigu leedahay. Ka sokow, waxaad heli doontaa sifooyin fara badan oo faa'iido leh oo loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad samaysato blog adigoon dadaal lahayn.
Blog-ga hal-abuurka leh waxa uu la socdaa qaabayn nadiif ah oo yar kaas oo u oggolaanaya in diiradda la saaro waxa ugu muhiimsan ee bloggaaga. Hubaal, waxaan ula jeedaa raalli. Ka sokow, inaad si buuxda uga jawaabto oo saaxiibtinimo mobaylka mawduucan ayaa dammaanad qaadaya waayo-aragnimada wax raadinta ee qumman. Uma baahnid inaad ka walwasho dabacsanaanta blog sababtoo ah waxay si fudud ula qabsan doontaa qalab kasta oo casri ah iyada oo aan tayada lumin. Dabeecaddeeda jawaab-celinta waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa qiimeynta SEO ee wanaagsan iyo korodhka taraafigga.
Codsashada isku xirka bulshada iyo badhamada wadaagga waxaad u oggolaanaysaa taageerayaasha inay dib ugu dhejiyaan daabacaadahaaga mareegaha warbaahinta bulshada. Xaaladdaas, waxaad faafin kartaa ereyga ku saabsan balooggaaga, markaa waxaad gaartaa dhagaystayaal bartilmaameed ballaaran. Ka sokow, akhristayaashaada waxay kula socon karaan shabakadaha bulshada ee kala duwan oo ay daawadaan noloshaada wixii ka baxsan blog-ka. Hubaal, xaqiiqadani waxay ka dhigi doontaa isgaadhsiinta dhagaystayaasha mid dhow.
Sifooyin badan oo wanaagsan oo lagu heli karo template-ka bilaashka ah, waxaan ku talinayaa in la tixgeliyo liiska soo socda:
Fiidiyowga iyo muuqaalka muuqaalka duubista.
Sawirka asalka gaarka ah iyo midabka.
Isticmaalka domain aan xadidnayn
Qoraaladii u dambeeyay iwm.
Khariidadda Adduunka [$59]
Haddii aan adiga ahaan lahaa, waan ku farxi lahaa inaan u isticmaalo mawduuca WordPress ee noocaan ah ee bloggeyga. Waxay haysataa wax kasta oo loo baahan yahay si loo aasaaso mashruuc socdaal oo dhammaystiran, xirfad-yaqaanna u eeg. Naqshad qurxoon, nadiif ah oo ay weheliso sifooyin horumarsan, plugins, iyo kordhin ayaa ka dhigaysa xal diyaarsan oo qumman. Ka sokow, qalabka la dheereeyey waxa uu ogolaanayaa codeless oo degdeg ah u habaynta, sidaa darteed dhisitaanka website uma baahna aqoon farsamo.
Isku-dhafan Elementor Page Builder wuxuu ka dhigayaa mawduuca WorldMap xitaa mid soo jiidasho leh bilawga iyo teknoolojiyadda labadaba. Waxay u ogolaataa curiyayaasha dhaqaaqa gudaha qaabka iyadoo la isticmaalayo jiid-n-dhib kaliya. Ahaanshaha mid ka mid ah tafatirayaasha ugu caansan Elementor waxay ku siinaysaa koontarool buuxa oo ku saabsan muuqaalka boggaaga. Iyadoo lala kaashanayo Jet plugins, waxay u oggolaaneysaa ku darida shaqeynta horumarsan ee bloggaaga. JetElements iyo JetBlog add-ons ayaa diyaar kuu ah adiga oo bixinaya fursado aan xadidnayn oo loogu talagalay dhisidda mareegaha iyo dhajinta blogka.
Sida mawduucyo kale oo badan oo WordPress ah, WorldMap waxa kale oo ay ku faani kartaa habayn si buuxda uga jawaabaya iyo qaabaynta ku habboon browser-ka. Sababtan awgeed, taageerayaashaadu waxay ka baari karaan balooggaaga aalad kasta oo suurtagal ah ama browserka shabakadeed. Template-ku waxa kale oo uu la socdaa gallery qurux badan kaas oo kuu ogolaanaya in aad jazz up posts blog aad images res sare. Ku buuxinta daabacaadaha waxyaabo muuqaal ah oo soo jiidasho leh waxaad tusi doontaa dhagaystayaasha inaad danayso khibradooda goobta.
Kuwa qorsheynaya inay iibiyaan dalxiisyada qoraaga, mawduuca WorldMap WordPress wuxuu bixiyaa plugin Ecwid isla markaaba sanduuqa. Caawinteeda, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto dukaan online ah oo si buuxda u shaqeeya, oo saaxiibtinimo leh oo si fudud u iibi adeegyada. Dhanka kale, foomamka shabakada lagu dabaqay bogga shabakadda, waxaad gacan ka geysan kartaa xiriir adag oo lala yeesho dhagaystayaashaada iyo macaamiishaada. Ilaha badan ee lagala xiriiri karo booqdayaashaada, waa inta la isku halayn karo sumaddaada.
Marka laga reebo guud ahaan sifada kor lagu soo sheegay, waxaa jira dhowr mudan in la muujiyo:
Baraha bulshada iyo nidaamka faallooyinka.
Ikhtiyaarada qoraalada la xidhiidha iyo kuwa isbeddelaya.
Waafaqid MailChimp iyo kuwo kale oo badan.
Pro Blogg [Bilaash]
Pro Blogg waa mawduuc kale oo bilaash ah oo WordPress ah oo si gaar ah loogu horumariyay socodsiinta blog cajiib ah. Waxay leedahay naqshad nadiif ah oo casri ah oo kuu ogolaanaysa inaad ka dhex muuqato bloggers kale. Dhanka kale, dabeecadeeda ka jawaaba ayaa ka dhigi doonta blog-kaaga la qabsiga qalab kasta oo booqdayaashu ay gacanta ku hayaan marka ay baadhayaan. Uma baahnid inaad ka walwasho sida qoraalkaaga iyo sawiradaada loo soo bandhigay. Sababtoo ah sidoo kale way dabacsan yihiin, waxaad hubin kartaa in si sax ah loo samayn doono.
Pro Blogg WordPress theme waxa uu leeyahay qaabayn ugu yar kaas oo kaa caawin doona in aad diirada saarto waxa ay danaynayaan dhagaystayaasha aad beegsanayso Ka sokow, isku dhafka warbaahinta bulshada waxaad u oggolaan doontaa akhristayaashaada inay la wadaagaan qoraalladaada mareegaha warbaahinta bulshada. Natiijo ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad gaarto dad badan oo aad caan uga noqoto internetka.
Xagga walxaha kale ee loogu talagalay in laga dhigo blog-gaaga muuqaal soo jiidasho leh, waxaad sidoo kale heli doontaa jiiditaan jawaab celin leh iyo ikhtiyaaro gadaal. Marka lagu daro walxaha, qaab-dhismeedka waxa ku jira qalabyo kala duwan oo ku siinaya awood buuxda oo aad ku habayn karto mareegaha. Xitaa haddii aadan lahayn aqoonta farsamada, tani kama hor istaagi doonto inaad maamusho dhismaha mareegaha. Pro Blogg waxa uu bixiyaa dukumeenti tafatiran oo kugu hagi doona talaabo kasta oo aad ku rakibayso mawduuca iyo u isticmaalida mashaariicdaada mustaqbalka.
Fadlan, eeg liiska hoose si aad u aragto waxa kale ee template-kaani qarinayo:
Scroll slider ka jawaabaya Motion.
1-guji demi slider-ka
Horumarinta SEO iwm.
Haddii aad qorsheyneyso inaad bilowdo blog-nololeed oo aad raadiso xalka ugu yar ee diyaarsan, BamBom waa taam weyn. Waxay ka kooban tahay is-dhexgal fudud iyo naqshad indho-qabad leh taasoo ka dhigi doonta blog-gaaga mid heersare ah. Dhanka kale, dabeecadeeda ka jawaabitaanku waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto dhagaystayaal ballaaran taasoo keentay taraafikada sare. Isku day mawduucan quruxda badan ee WordPress haddii aad u baahan tahay qalab horumarsan oo lagu dhejiyo blog. Anigoo tixgalinaya qalabka BamBom waxaan jeclaan lahaa inaan ku joojiyo kuwan soo socda.
Tifaftiraha nuxurka Elementor-ku-dhex-dhisan waxa uu ku faanaa ururinta ugu dambaysa ee widgets, qaybo, iyo walxo kale si looga dhigo dhisme mareegaha mid dhib badan. Adigoo isticmaalaya boggan gaarka ah, waxaad si buuxda u xakameyn kartaa muuqaalkaaga blogka oo aad ku dabaqi kartaa isbeddelada hadba baahidaada. Marka lagu daro Elementor, waxaad heli doontaa xirmo buuxa oo ah Plugin Jet. Waxay ujeedadoodu tahay inay ku daraan shaqeyn horumarsan boggaaga shabakada, markaa kor u qaad waxqabadkeeda. Aynu sii aragno waxa ku-darka Jet-ka ee aad ku heli doonto mawduuca BamBom WordPress.
JetElements plugin waxay keentaa daraasiin habayn ah oo u oggolaanaya qaabka nuxurka ilaa tafaasiisha ugu yar. Iyada oo loo marayo JetElements, waxaad ka heli doontaa qaybo aan lagu darin xirmada Elementor ee caadiga ah.
JetThemeCore add-on waxay la socotaa qaybo diyaarsan oo ka kooban qaybo iyo widgets horay loo qaabeeyey kuwaas oo u oggolaanaya in boggaga laga soo bilaabo eber. Plugin-kan, waxa kale oo aad samayn kartaa madax iyo footer leh dhawr gujin oo keliya.
JetBlog Plugin waxa ku jira noocyo kala duwan oo widgets blogging ah oo ka dhigaya mid fudud in la dhiso nuxur firfircoon. Adigoo ka faa'iidaysanaya Liiska Smart iyo Tiles, Liiska Ciyaarta Fiidiyowga, iyo Ticker Text waxaad u soo bandhigi kartaa qoraallada si ka sii qurux badan.
Si habka habaynta looga dhigo mid aad u xiiso badan, horumariyayaashu waxay ku dareen bogag ikhtiyaari ah iyo sawirro gunno ah. Halka bogag indho qabad leh ay ogolaadaan dhisitaanka bog guri, bog boosto, iyo hal bog oo boosto ah, sawirada res-sare ayaa kaa caawin doona in ay kor u qaadaan. Ka sokow, waxaad ka heli doontaa TM Timeline iyo plugin Ecwid, foomamka shabakada shaqada, WP Live Customizer, iyo warqad qaabaysan oo faahfaahsan. Laba kelmadood, BamBom waa xalka ugu fiican ee samaynta blog shakhsiyeed oo heersare ah oo leh rajada miisaan dheeraad ah.
Dulmarkan, waxaan go'aansaday inaan ku daro mawduucyada WordPress ee bilaashka ah iyo kuwa qaaliga ah labadaba si aan kuu siiyo doorasho. Haddaba, haddii aanad helin hab-raacyadii hore ee ku habboon mashruucaaga, tijaabi Dazzling. Waxay ku habboon tahay faylalka, ganacsiga, baloogga, shakhsi ahaaneed, safarka, shirkadda, iyo mashaariicda kale.
Kani waa mawduuc WordPress ah oo bilaash ah oo leh guri fidsan, nashqad jawaab celin leh iyo hawlkarnimo sare. Nashqadan qaabaysan, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto baloog leh hawlqabad siman iyo hagitaan fudud. Markaad u isticmaalayso Dazzling si aad u dhisto blog ma yeelan doontid sifooyin xaddidan. Ku qalabaysan kala duwanaansho midabyo badan, meelo badan oo widget ah, slider muuqaal ah oo dabacsan, iyo walxo kale waxay u oggolaanaysaa in si fudud loogu habeeyo mareegaha.
Mawduucan ugu dambeeya ee WordPress waxaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo Bootstrap 3 taasoo ka dhigaysa mid si buuxda uga jawaabeysa oo la qabsanaysa aaladaha mobilada. Dhanka kale, qaabeynta saxda ah ee pixel-ku waxay dammaanad qaadi doontaa muuqaal u gaar ah boggaaga.
Muujinta ikhtiyaarada mawduucyada ku dhex dhisan Dazzling waxay keentaa qalab ikhtiyaari ah oo wax lagu beddeli karo. Waxaad haysataa fursad aad ku tafatirto tafaasiisha xuquuqda daabacaadda footer, beddelka midabka cutubka, habaynta slider, oo aad beddesho xarfaha. Gudaha xirmada, waxa kale oo aad ka heli kartaa dhawr 1-guji midab dooriye oo kuu ogolaanaya inaad bedesho midabada shay kasta. Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato sifooyinka kale ee ku jira xidhmada, eeg liiska hoose:
Slider sifaysan waxay hubisaa in macluumaadkaaga ugu muhiimsan ay ka soo dhex muuqdaan dad badan. Ay taageerto FlexSlider waxay soo bandhigtaa dhowr astaamood iyo kala-guurka slide ee cajiibka ah.
Taageerada Plugin waxay ku siinaysaa marin u hel plugins-yada bilaashka ah ee ugu caansan iyo kuwa qaaliga ah ee la tuuri karo oo leh cusbooneysiin joogto ah. Waxaad filan kartaa Foomka Xiriirka 7, WordPress SEO Plugin, Jetpack, iyo waxyaabo kale oo lagu daro oo laga heli karo adeeggaaga.
Is dhexgalka WooCommerce wuxuu awood u leeyahay sameynta dukaan toos ah oo khadka ah.
Xirmada Awesome Icons Font waxay bixisaa astaamo ku saleysan vector oo loo isticmaali karo midab iyo cabbir kasta.
Qaabka diyaarsan ee Turjumaada waxa uu ogolaadaa in la dhiso ilo shabakad ku hadasha luqado badan iwm.
Blog Cunnada [$59]
Haddi aad jeceshahay cunto karinta qoyskaaga ama aad cunto ku diyaariso makhaayadda, waxa laga yaabaa inaad u baahato blog si aad ula wadaagto khibrada. Haddii aad weli ka shakisan tahay sida ay u ekaan doonto, waxaan kugula talin lahaa inaad ku bilowdo template bilaash ah. Sida midda oo kale, waxaan si gaar ah u doortay mashaariicda shabakadda ee cuntada la xiriirta. Mawduuca Cunnada ee Blog-ga WordPress waxa uu leeyahay nakhshad nadiif ah iyo qaabayn yar oo kuu oggolaanaysa in aad diiradda saarto waxa ku jira.
Marka ay timaado dhisidda sawir lagu kalsoonaan karo oo mashruucaaga ah, waxaad ku tiirsanaan kartaa isdhexgalka warbaahinta bulshada. Codsashada badhanka wadaagga bulshada waxaad u oggolaanaysaa kuwa raacsan inay ku wadaagaan boostadaada shabakadahooda bulshada. Haddii aad sidaa sameysid waxay kaa caawineysaa inaad gaarto dad badan oo dhagaystayaal ah, markaa ku xayeysiiso mashruuca internetka. Ka sokow, waxaad dhisi kartaa xiriir adag oo aad la yeelato dhagaystayaasha adoo isticmaalaya warbaahinta bulshada iyo hababka faallooyinka. Dhanka kale, siinta foomka xiriirka nadiifka ah waxay u ogolaaneysaa inay kula soo xiriiraan wakhti kasta.
Inta soo hartay sifada laga tuuri karo Blog-ga Cunnada waxaa ka mid ah ikhtiyaarrada mawduucyada iyo awoodda menu-ka, waafaqsanaanta browser-ka, iyo qaybaha. Ka faa'iidaysiga mawduucan WordPress waxaad helaysaa wax kasta oo loo baahan yahay si loo aasaaso isticmaale-saaxiibtinimo iyo baloog soo jiidasho leh. Sidaa darteed, ha lumin fursad aad ku tijaabiso mashruucaaga cuntada mustaqbalka.
Meltony Lite [Bilaash]
War wanaagsan! Horumariyayaashu waxay abuureen nooc bilaash ah mawduuca Meltony WordPress. Sidaa darteed, haddii aad waligaa rabtay inaad tijaabiso laakiin miisaaniyad xaddidan tahay, waa waqtigii ugu fiicnaa ee imtixaanka hordhaca ah. Haddii aad ka welwelsan tahay shaqeynteeda, waxaan ku degdegayaa inaan ku qanciyo inay jiraan doorashooyin ku filan oo habeyn ah. Waxa kaliya ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad isticmaalayso template bilaash ah waa inay timaado adeeg taageero la'aan.
Sida mawduuc kasta oo kale oo WordPress ah, Meltony wuxuu leeyahay qaab si buuxda u jawaabaya iyo qaab mobile-saaxiibtinimo ah oo ay la socoto nakhshad nadiif ah oo yar. Taas oo la yiraahdo, boggaaga internetka waxaa laga heli karaa qalab kasta oo casri ah oo ay ku jiraan tablets iyo smartphones. Maadaama qoraalka iyo sawiradu ay sidoo kale dabacsan yihiin, booqdayaashu ma la kulmi doonaan khasaaro tayo leh marka ay baadhayaan blog-ka. Iyada oo la adeegsanayo template Meltony, waxaad xaqiijin kartaa khibrad isticmaale oo heersare ah.
Sidaan horeba u soo sheegay, mawduucan WordPress ma laha hawlkarnimo. Waxay ku qalabaysan tahay Elementor Page Builder iyo Customizer Live. Halka Elementor uu ogolanayo in la dhiso nooc kasta iyo kakanaanta, Live Customizer wuxuu caawiyaa in lagu dabaqo isbeddelada iyada oo aan dib loo soo dejin bogga. La shaqaynta labadan qalab waxaad si fudud u maareyn kartaa habaynta mareegta xataa haddii aad leedahay xirfado codayneed oo yar. Inta badan mawduucyada WP, oo ay ku jirto Meltony, waxay dammaanad qaadayaan dhisidda degel aan code lahayn marka la riixo badhanka.
Muuqaal kale oo mudan in la xuso waxaa iska leh Ecwid plugin, mid ka mid ah kuwa ugu caansan eCommerce add-ons. Caawinteeda, waxaad samayn kartaa dukaan toos ah oo online ah oo ku yaal mareegahaaga ama bloggaaga. Iibinta alaabada ama adeegyada ayaa aad ugu fududaada qalabkan ugu sareeya. Waxay la socotaa walxaha ku habboon ee loogu talagalay inay khibradda wax iibsiga ka dhigto mid xiiso leh.
Sifooyinka kale ee laga heli karo isla markaaba sanduuqa, waxa kale oo aad ka heli kartaa kuwan:
Nidaamka isdhexgalka iyo faallooyinka warbaahinta bulshada.
Liiska hoos-u-dhaca iwm.
Markaan tixgelinay mawduuc kasta oo WordPress ka mid ah liiska, waxaa laga yaabaa inaan aragno in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu leeyahay astaamo iyo naqshado kala duwan. Wax xun maaha, ma aha?
Qof kastaa wuxuu leeyahay fursad uu ku doorto ikhtiyaarka ku habboon baahiyaha. Waxaan rajeynayaa inaad liiskan faa'iido u heshay oo aad meel dhigtay qaabka ku habboon.
Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah, waxaad xor u tahay inaad xagga hoose kaga tagto. Ha iloobin inaad la wadaagto qoraalkan saaxiibada kasta oo raadinaya xal diyaar ah oo loogu talagalay boggooda.
Sida loogu dhejiyo iFrame Code Boggaga WordPress (Gacan iyo Plugins)
Beddelka Qaab dhismeedka URL kaaga ma tahay fikrad xun?